Filtrer les éléments par date : mardi, 05 janvier 2021
mardi, 05 janvier 2021 21:08
Pilo kely: Ny mpangalatra akoho ihany no aseho vahoaka
Rehefa mpangalatra akoho dia malaky aseho ny sary, na takonana aza ny masony, fa rehefa mpanondrana volamena, mpanondrana sokatra, mpividy taolam-paty, mpampanofa basy kalaky, dia lasa tsy fantatra tampoka teo na ny anarany aza, nefa dia olona miondrana amin'ny fiaramanidina be izao.
Kay moa efa nisokatra ny sisintany mandeha any Afrika atsimo? Dia lazaina fa reseau henjana be ilay ao ambadika, ka maninona no tsy gadraina aby ny nanome alalana izany fiaramanidina hivoaka eto an-toerana izany, ireo douanier sy zandary ary police de la frontière.
Miandry anarana izahay.
Efa eto ihany, mba tenenonareo ao amin'ny présidence ireny olona milaza fa avy amin'ny présidence dia tsy savaina eny Ivato ireny, toa misy mpitandro filaminana manaraka manao escorte mihitsy aza, milanja sakosy mavesatra mandeha fiaramanidina manokana, mety mpisoloky izy ireny fa mailo nareo ao.
mardi, 05 janvier 2021 19:35
Trafic d’or : L’Interpol intervient
L’affaire qui défraie la chronique depuis lundi est internationale.
Le service de la police sud-africaine a dit qu’il travaille avec Interpol pour enquêter sur l’origine des lingots pesant 73,5 kilos interceptés et confisqués à l’aéroport international OR Tambo en Afrique du Sud lundi.
Trois hommes en provenance de Madagascar ont comparu devant le tribunal de Kempton Park Magistrate le même jour pour cause de trafic illicite de métaux précieux et d’infraction douanière.
Les suspects à destination de Dubaï étaient arrêtés par les membres d’une équipe multidisciplinaire.
Les prévenus auraient bien pu être impliqués dans des actes de blanchissement d’argent et de fraudes.
Leur audition a été reportée au 12 janvier prochain en entendant de plus amples informations.
Nanao fanambaràna ny ministeran'ny fampianarana ambony fa eo ambany fiadidiany tokoa ny Foyers Universitaires Malgaches na FUM ao Arago sy Cachan any Frantsa, ary ao anatin'ny velirano faha telon'ny filoham-pirenena ny fanavaozana sy fanatsarana ny rafipitantanana, ka anisan'izany ny fanavaozana ireo mpiasa any an-toerena.
Manamafy kosa anefa ity fanambaràna nosoniavin'ny Sekretera jeneralin'ny ministera ity, fa tsy nifandray tamin'ny fikambanana "Tous Ensemble pour Madagascar" na TEM any Frantsa, ary tsy mbola nametraka tolotrasa teo anivon'ny ministera ny TEM, ny ministera rahateo nilaza fa tsy mbola nisy tolotrasa mahakasika izany nataony.
Marihin'ity fanambaràna ity fa ny TEM dia fikambanana toa ny fikambanana rehetra, ary tsy manana rohy manokana amin'ny ministera.
Manamafy ny ministera fa tsy maintsy manaraka ny fepetra voarakitry ny lalàna ny fampidirana sy fanoloana ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony.
Covid-19 : Manidy trano i Seychelles
Nikabary ny filoha Ramkawalawan tao amin'ny fahitalavitra any an-toerana fa niakatra be ireo olona voan'ny Covid-19 ka tsy maintsy mandray fepetra aingana.
Nakatona avokoa ny sekoly, ny fiangonana, ny toeram-pisotroana, ny toerana fanaovana fanatanjahan-tena.
Nambarany tamin'izany fa 69 amin'izao ireo olona marary mafy. Anisan'izany ireo mpiasan'ny fahasalamana 28 (Cas contacts), 297 izao ireo voa, ary 1 no maty, lehilahy 57 taona, niditra hopitaly tao Persévérance ny alahady teo, ary namoy ny ainy aingana dia aingana ny alatsinainy ihany, 83 marary nifindran'aretina, ary 2 no miady amin'ny fahafatesana.
mardi, 05 janvier 2021 11:23
Covid-19 : Miverina mihiboka i Angletera
Nanao fanambaràna ny Praiminisitra angilisy Boris Johnson omaly alatsinainy 04 janoary, manoloana ny fiakatry ny fifindran'ny valanaretina, niova hery, Covid-19 fa miverina mihiboka tanteraka i Angletera manomboka ny alarobia 6 janoary manomboka amin'ny 12 ora alina sy 1 minitra, ary izany dia hatramin'ny tapaky ny volana febroary raha feno ny fepetra ahafahana miverina mivoaka ny trano.
mardi, 05 janvier 2021 08:21
Ambovombe : Rakotry ny rivotra miaraka fasika ny tanàna sy ny tany fambolena
Nanomboka ny 30 desambra 2020 ka hatramin'ny omaly alatsinainy 04 janoary 2021, dia tsy nitsahatra ny rivo-mahery arahana fasika taty Ambovombe.
Maina ny tany, tsy misy fambolena vanona, tsy misy ny sakafo, mihamafy ny kere.
Diso fanantenana ny mponina raha RN13 Ihosy - Tolagnaro no nampanantenaina amboarina, nefa toa mandeha indray ny resaka fa Ambovombe Tolagnaro indray no atao. Samy ilaina daholo ireo lalana ireo hoy ny mponina, fa hatreto tsy misy vaha-olana mamaha olana mikasika ny kere.
Efa lanin'ny olona hatramin'ny masomboly, raha tara fandraisana andraikitra ny fanjakana hoy ny mponina, dia faty olona amin'arivony sy aman'aliny no ho avy tsy ho ela.
Noraisina ny angady sy ny lapelina ary ny boreta mbamin’ny sihoa miaraka amin’ny simenitra sy ny fasika ary vato.
Indro ireo zandary avy ao amin’ny tobinjanam-paritra (poste avancé) aty Bembary Gara (MLA), Moramanga, fa rafitra nanentsin-davaka tamin’iny lalam-pirenena faha-44 mankany Alaotra iny.
Mialoha ny fiafaran’ny taona 2020 teo no nitrangan’izany.
Nahazo baiko avy tamin’ny ny jeneraly Andrianjanaka Lanto, izay Komandin’ny Zandriamariam-pirenena izy ireo.
Tsikariny ho misy lavaka ahiana hitera-doza eo amin’ny fidirana atsimon’ny “radier” mialoha ny hamakivakiana ny tanànan’i Mandrota.
Lalovany matetika izany lalana izany, ka hitany tsara, ary dia niafara tamin’ny fanomezana baiko izay, nandritra ny fandalovany taty an-toerana.
Nandray andraikitra avy hatrany, noho izany, ny zandary tao ao amin’ny tobinjanam-paritr’i Bembary ka nanamboatra vonjimaika tamin’ny alalan’ny fanotofana "béton" ny lavaka.
mardi, 05 janvier 2021 07:57
Trangam-piaraha-monina: Nariany tao anaty lava-piringa ny zanany naterany
Ramatoa iray tokony ho 45 taona eo ho eo no nahavita namono ny zanany naterany ny Alahady 3 janoary lasa teo, tao amin'ny Fokontany Ambano, Antsirabe faharoa.
Bevohoka ary teraka soamantsara ity ramatoa ity ny alin'ny sabotsy hifoha Alahady teo. Ny maraina nefa dia gaga ny zanany fa nahita vongan-drà teo an-tokontany ary nino fa teraka ny reniny saingy tsy nahita zazakely izy.
Nampandre ny manodidina ilay zaza ary nitondra mpitandro filaminana sy mpampivelona ny olona ka teo no nivoahan'ny marina fa teraka tokoa izy, saingy novonoiny ary nariany tao andava-piringa ilay zanany.
Rehefa noloarana tao dia voamarina tokoa fa tao ilay zazakely ary lahikely efa tsisy aina intsony izany.